Indlwana ebukekayo eneembono zeSurrey Hills
I-2 Lime Tree Cottages yindlwana yeVictorian enesimilo ebekwe encotsheni yenduli eneembono zepanorama ngaphezulu kweSurrey Hills emangalisayo nangaphaya.
Kutshanje ihlaziywe ngokupheleleyo kwaye yandiswa ukuya kumgangatho ophezulu onesitayile esihle sangaphakathi selizwe langoku. Igumbi lokuhlala eliphangaleleyo kunye neLogburner yokulala eBusika. Igumbi legadi elinendawo yokutyela enkulu / indawo yokonwabisa. Amagumbi okulala ane-Hypnos/Intsiba kunye noomatrasi abaMnyama abagqunywe ngelinen entle eyi-100%. Iishawari eziphakamileyo kumagumbi okuhlambela anethayile lebhastile.
Le ndlwana ibekwe kumgca wokugoba okufuphi neNdlela eMantla eDowns ingqongwe ngumhlaba weNational Trust. Indawo yabakhweli beebhayisikile, abahambahambayo kunye nabathandi bendalo. Emaphandleni kodwa kumgama wokuhamba wePolesden Lacey NT, iDenbies Wine Estate kunye neDolophu entle yeMarike yaseDorking enoluhlu lwayo lweevenkile, iivenkile ezinkulu kwaye sinelunda kakhulu ngokuba neMichelin Star Dining, Indawo yokutyela yeSorrel nguSteve Drake kunye nezinye iindawo zokutyela, ii-cafes kunye ne-pubs ukuba ujabulele. I-Dorking yeyona dolophu iphambili enceda zonke iilali zesiNgesi ezingqonge yona ukuze uphonononge. Iivenkile zasefama, ii-gin distilleries kunye nabavelisi be-Artisan zininzi. IShere yeyona ndawo ithandwayo yindawo yefilimu edumileyo iHolide.
Indawo endiyithandayo yiLeith Hill Tower enokubonwa kumgama ukusuka kwindlu kunye negadi. Iphawula eyona ndawo iphakamileyo kuMzantsi Mpuma weNgilani.
Ivenkile yeFama yaseKingfisher kunye nevenkile yeentyatyambo kunye neebhedi zabo ze-watercress ndizisebenzisa rhoqo ukuqokelela ukutya okumangalisayo kunye neentyatyambo ezintle.
Uhambo oluya eAlbury Organic Vineyard, Silent Pool Gin kunye neMandira's Kitchen kufuneka uqokelele iwayini emnandi, igin kunye nokutya kwamaNdiya. Ukhenketho kunye nezifundo zokupheka kunye nemisitho eqhuba unyaka wonke.
Ndifumaneka ngefowuni okanye ngetekisi kwaye kufutshane ngalo naluphi na uncedo okanye imibuzo enokuthi ivele.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$2056